Sida loo rakibo xirmo luqadeed Windows, oo ay ku jiraan Isbaanish | Wararka Gadget
Ma rabtaa inaad ogaato sida ku rakib xirmo luqadeed Windows 7 ama nooc kasta oo kale oo ka mid ah nidaamka hawlgalka ee Microsoft? Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in Microsoft ay u timid inay bixiso nooca Windows 10 oo ah nooca tijaabada ah oo ay ku jiraan nambarka taxanaha ah, dad badan ayaa soo degsaday hadana waa tijaabinayaan ogaadaan astaamaha cusub.
In kasta oo tani ay tahay war weyn, nasiib darro noocyada kala duwan ee aan ku soo dejisan karno waxaa laga helaa oo keliya luuqado kooban. Iyada oo la hubo in goor dhow xirmooyinka luqadda ee Windows 10 ay ka soo muuqan doonaan Microsoft sida cusbooneysiinta, ama sida feyl ahaan looga soo dejisto server-yadooda. Sababtaas awgeed, hadda waxaan xusi doonnaa khiyaanada lagu rakibo xirmo luqadeed Windows ka kaa caawin doona markaad u habaynayso nidaamkan hawlgalka luqadda aan doonayno.
1 Sida loo rakibo xirmo luqadeed Windows-ka
2 Sida loo soo dejiyo luqadda Isbaanishka Windows 10
2.1 Sida loogu kala beddelo luqadaha Windows 10
3 Sida loo soo dejiyo luqadda Isbaanishka Windows 8.x
4 Sida loo soo dejiyo luqadda Isbaanishka Windows 7
Xeeladda aan hadda soo jeedin doonno waxaa laga adeegsan karaa Windows 7 wixii ka dambeeya illaa iyo inta xirmada luqadeed ee aan xiiseyneyno ay jirto; Si tan loo sameeyo, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad raacdo talaabooyinka soo socda:
Ku bilow casharkaaga Windows.
Hadda waxaad isticmaashay toobiye kiiboodhka Win + R.
Booska ku qor: LPKSetup
Halkan laga bilaabo waxaad awoodi doontaa inaad ka fuliso hawlgal kasta oo adiga xiisa kuu leh, taas oo ah, ta ah Ku rakib ama uninstall luqad. Xaaladda aan uqalmin, waxaan isku dayi doonaa inaan doorano ikhtiyaarka koowaad, taasi waa, tan noo oggolaan lahayd inaan "rakibno afafka".
Markaad doorato ikhtiyaarkan waxaan u boodayaa qayb kale oo daaqadda ah iyo meesha, waxaan fursad u lahaan doonnaa ku rakib xirmada luqadda adeegyada cusbooneysiinta Windows ama kombiyuutarkayada; Beddelka ugu dambeeya waxaa loo isticmaali karaa illaa iyo inta aan ka soo dejisanno xirmada kombuyuutarka shakhsi ahaaneed. Haddii meel gaar ah aan ka ogaanno in Microsoft ama horumariyaha dhinac saddexaad uu soo jeediyay luuqad Isbaanish ah oo loogu talagalay Windows 10, waxaan u isticmaali karnaa khiyaanadan iyo qaabkan si aan ugu awoodno inaan nidaamino nidaamka qalliinka ee aan jeclaanno.
Sida loo soo dejiyo luqadda Isbaanishka Windows 10
Nooca ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka ee Microsoft, Windows 10, wuxuu la yimid gacanta tiro aad u badan oo horumarineed, kaliya ma ahan marka la eego waxqabadka oo muujinaya waxqabad aad uga wanaagsan dhammaan kuwii ka horreeyay, laakiin sidoo kale wuxuu noo keenayaa horumar xagga rakibidda adeegyada ama siyaado ah, sidaa darteed uma baahnin inaan u tagno bogga internetka ee Microsoft si ficil ah wakhti kasta si aan u awoodno inaan raadino waxyaabo dheeraad ah, maadaama xaaladdan ay noqon karto luqadda noocayaga Windows 10.
Markaad ka soo degsaneyso ISO bogga Windows 10, Microsoft waxay na siineysaa ikhtiyaar aan ku dooran karno luqadda rakibidda si markaa, inta hawshu socoto oo dhan, farriimaha lagu soo bandhigi doono luqadda Cervantes. Laakiin haddii sabab uun jirto waxaa nagu qasbay inaan bedelno luqadda noocayaga Windows-ka ah, Ma aha inaan dib ugu laabanno bilowgii oo aan ku rakibno nooc cusub oo Windows 10 ah, laakiin si toos ah Windows 10 xulashooyinka qaabeynta waxaan kala soo bixi karnaa xirmo luqadeed oo aan dhisi karnaa midka aan dooneyno in aan u muujinno asal ahaan.
Si aad u soo degsano xirmo luqadeed cusub Windows 10 waa inaan ku soco sida soo socota:
Waan kor u kacaynaa Dejinta> Waqtiga iyo Luqaddaa.
Safka bidix guji Gobol iyo luuqad
Qaybta saxda ah waxaan u aadnay Luqadaha oo gujineynaa Ku dar luqad.
Hoos waxaa ku qoran dhammaan luuqadaha la heli karo oo aan ka soo dejisan karno Windows 10. Kaliya waa inaan Xullo luqadda aan rabno waana intaas.
Sida loogu kala beddelo luqadaha Windows 10
Markaan fulino dhamaan talaabooyinkii hore, waa inaan dooranaa luqada aan rabno inaan ku isticmaalno noocayaga Windows-ka. Kaliya hoosta waxay ka muuqan doontaa seddex ikhtiyaar: U dejiso sida caadiga ah, Xulashada iyo Tirtirida. Xaaladdan gaarka ah Waxaan dooranaynaa Deji ahaan sidii ugu habboonayd si luuqadda noocayaga Windows 10 loo beddelo taas oo aan ku soo xulnay. Haddii aan rabno waxay ku noqon doontaa afkeenna hooyo, waa inaan qaadnaa isla tallaabooyinka xulashada luqadda Isbaanishka (waddanka aan joogno)
Sida loo soo dejiyo luqadda Isbaanishka Windows 8.x
Nidaamka lagu soo dejisan karo luqado cusub si loo beddelo midka Windows-ka na tuso asal ahaan waa la mid ah waxa aan ka heli karno Windows 10. Nidaamku waa kuwan soo socda:
Waxaan ku wajahan nahay Guddiga Xakamaynta
Hadda waan kor u kacnay Idioma oo guji Add luqad.
Marka xigta waa inaan ka helnaa luqadda aan rabno inaan ku rakibno noocayaga Windows 8.x. dooro oo guji Kudar.
Mar haddii lagu daro, waa inaan gujino luqadda aan ku darnay oo aan dooranno Soo dejiso oo rakib xirmo luqadeed, si ay Windows u daryeesho soo dejinta kombuyuutarradeena.
Markaad soo dejiso, xulo luqadda waana inaan doorannaa dib u bilaw kumbuyuutarkeena si luqadda noocayaga Windows 8.x uu ​​ina tusayo loo beddelo midda aan xulnay.
Sida loo soo dejiyo luqadda Isbaanishka Windows 7
Windows 7 wuxuu na siiyaa si la mid ah labada nooc ee dambe ee nidaamka qalliinka Microsoft si aan awood ugu yeelano inaan ku darno luqado cusub, sidaa darteed waxaan u baahanahay inaan booqano websaydhka Microsoft si aan u soo degsanno luqadda aan rabno inaan rakibno. Luuqadaha ugu isticmaalka badan waxaan si toos ah uga heli karnaa cusbooneysiinta kala duwan ee Microsoft ayaa la sii daayay intii lagu jiray taageerada noocaan, laakiin dhammaantood lama heli karo.
Isbaanish, iyada oo aan la sii sii wadin, ayaa la heli karaa sidaa darteed haddii aan dooneyno inaan beddelno luqadda noocayaga Windows 7 waa inaan tagnaa qaybta Luqadda ee laga heli karo Guddiga Xakamaynta. Haddii lid ku ah, waxaan rabnaa inaan ku rakibo xirmo kale oo luqadeed Windows in dal ahaan uusan ku jirin nooca Windows 7 ee aan rakibnay, waan awoodnaa booqo bogga taageerada Microsoft ee dhammaan luqadaha la heli karo hadda loogu talagalay qaybtan Windows-ka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida loo rakibo xirmo luqadeed Windows-ka
Habeen wanaagsan! Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado meesha aan kala soo bixi karo xirmada luuqada ee aad ku hadasho halkan si aan u rakibo. Fadlan.
Maanta 07/11/2017 ma shaqeynayo, mahadsanid!
Waad salaaman tihiin, wax walboo waa waxtar badan, laakiin xaaladdaydu waxay tahay in qaabeynteydu aysan i siinin ikhtiyaarka seddexaad ee "u dejiyo sida caadiga ah" markaan ku daro luqadda Isbaanishka. Waan tirtiray oo waan soo degsaday tan oo jeer walina iima siinayso ikhtiyaarkaas. Ma aqaan waxa aan sameeyo mar dambe = (